> Resource > Android > Hel Video Best The Player inay Play Video ku Android
Maxay yihiin ciyaartoyda ugu fiican ee video for Android? Waa shaqo fudud ma tahay in la helo ciyaaryahan video gudahood 300,000 codsiyada on Market Android ah. Laakiin waxaan halkan u taaganahay inay idinka caawiyaan. Waxaan u sharaxan ugu sareeya 3 Android ciyaartoyda video eego interface, waafaqid iyo tayada video si kor madadaalada.
Ultimate DVD iyo video xal kuu oggolaanaysa in aad loogu badalo video iyo dvd guriga si video in kasta oo qaab 30X ka dhaqso badan ka hor iyo sidoo kale in ay gubaan videos in DVDs. Baro More >>
No.1 Video Player u Android: Wondershare Player u Android
The Wondershare Player u Android soo baxay on top ee Android xulay liiska imtixaanka naga video ciyaartoyda. Waa ficil kuu ogolaanaysaa inaad daawato aad Android videos effortlessly wakhti kasta, meel kasta.
Features Key ee Wondershare Player u Android
Taageer multi-format videos sida AVI, VOB, FLV, wmv, TS iyo wax ka badan.
Play online geeyo videos ka YouTube, VEVO, Dailymotion, Meacafe iyo vimeo.
Stream dhex HTTP, RTSP, MMS oo RTSP / RTP hab maamuuska videos.
Cache videos ka goobood ee cid saddexaad waxaa si la dambe loo maqli karo.
Stream videos ka phone qalabka waaweyn-screen sida PC ah, Mac iyo TV.
No.2 Video Player u Android: RockPlayer Lite
RockPlayer Lite waa version xayaysiinta taageerto ee ka bixisay RockPlayer ah. Waxay leedahay hawlaha dhabta ah ee isku version bixisay marka laga reebo ma waxaad ka iibsan kartaa oo weli ay dhaqaajiso, oo ay ku jiraan interface dareen leh, video tayo sare leh iyo waxqabadka. Si aad u saaro xayaysiinta, waxaad tagi kartaa in ay homepage si aad u iibsato via PayPal.
NO.3 Video Player u Android: VPlayer (7 Maalmood Trial Free)
VPlayer ma aha ciyaaryahan video free u Android. Waxaa ku qiimihiisu yahay $ 5 in lagu furo. Si kastaba ha ahaatee, waxaad isticmaali kartaa ilaa version maxkamad si buuxda u shaqaynaysa ilaa 7 maalmood. VPlayer si weyn lagu talinayaa maxaa yeelay waxa ay taageertaa hardware dardargalinta kelmadaha in qeexitaanka sare (HD) videos. Oo waxaa la rumeysan yahay in kelmadaha hardware isticmaalo batariga ka yar marka la barbar dhigo software kelmadaha kale sida MoboPlayer. Iyadoo VPlayer, aad ku raaxaysan karaan video tayo sare on your Android, inkastoo kelmadaha hardware ay ku xidhan tahay awoodda video codec qalab ee.
Imtixaanka lagu daydo Android
Talooyin dheeraad ah: Haddii aad rabto in aad ka ciyaari DVD filimada ee Android, waxaad u baahan doontaa weyn Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ) si loogu badalo DVD cajalladaha si aad u video files. Sida aad la socotaanba, ma dhan video ciyaaryahan Android uu oggolaan in aad si toos ah u ciyaaro DVDs on Android yeelay, ma jiro DVD drive on aalad Android. Qaar ka mid ah Android-leheyn qaabab video, aad ciyaaryahan video Android ma taageeri laga yaabaa in iyaga ama noqon doonaa oo kaliya ay awoodaan in ay iyaga ka ciyaaro tayo liita. Xaaladdan oo kale, waxa kale oo aad isticmaali kartaa this video Converter weyn si ay u badalo in ay ka qaabab ay taageerayaan-Android ugu ballaaran.
Download Free ee Android aad video Converter: